कोशी अनलाइन शनिबार, २८ भदौ, २०७६ मा प्रकाशित
‘हैन के खाजा खान्छस् हँ आजकल ? लगेको पैसा पनि सप्पै फिर्ता ल्याएर खुत्रुकेमा हाल्छ, दुब्लाएर सिन्को भैसक्यो,’ छोरो आफ्नो पकेटमनी खुत्रुकेमा हाल्दै थियो । मेरी श्रीमती कराउँदै बैठक कोठामा छिरिन् । ‘पकेटमनी सेभ गरेर एउटा काम गर्नु छ के ।’ छोरोले पचासको नोट खुत्रुकेभित्र छिराउँदै भन्यो ।
‘के चाहिएको हो भन् न, बरु हामी किनेर ल्याइदिन्छम् । खाजा नै नखाइ यसरी ज्यान सुकाएर पनि हुन्छ त ?’ मातृवात्सल्य बोल्यो, ‘ठीकै भो, बजारको नानाभाँति खाजा खाएर झन् ज्यान खराब हुन्छ । कमसेकम बचत त हुन्छ । बरु घरैमा मीठो खाजा पकाएर पठाइदिनु नि, कि कसो बाबु ?’ मैले छोरोको सपोर्ट लिँदै बोलेँ ।
मेरा कुरा सुनेर छोरो म नजिक आयो । मायाले सुम्सुम्याएँ । श्रीमती खुट्टा बजार्दै बाहिर निस्किइन् । ‘किन हो त नि केटा पकेटमनी सेभ गर्न लागेको ? म कसैलाई भन्दिँन, खुसुक्क भन् न । बरु म पनि तेरो खुत्रुकेमा अलिकति पैसो हाल्दिम्ला ।’ मैले कुरो फुत्काउन खोजेँ ।
‘त्यस्तो केही हैन बा, स्कूलबाट फर्किने बेलामा त्यो ठूलो गेट छ नि, हो त्यो गेटमा बसेर एउटी बुढी आमोइले मलाई सधै चक्लेट, मिठाइजस्ता खानेकुरा दिनुहुन्छ । कहिले कहिले त लड्डु रसबरी पनि पो दिनुहुन्छ त । यो दशैंमा ती आमोइलाई गिफ्ट दिनुपर्यो भनेर नि !’ छोरो बोल्दै गयो । म भने आफ्नी आमालाई सम्झिएर भक्कानिएँ । आमाको पोल्टामा छामी–छामी निकालेको मिठाइ, बिस्कुट सम्झिएँ । साथसाथै छोरोको आमोइलाई सम्झेर मन अमिलो भयो ।
आज बिहानै केटाले खुत्रुके फुटाल्यो । हाम्लाई गन्न पनि नदिइकन पैसो पोको पारेर झोलामा हाल्यो । पहिले नै सहमति भएअनुसार उसकी आमालाई खबरै नगरी छोरा र म खुसुक्क बाइकमा चढेर बाहिर निस्कियौं । बजारबाट उसले बलियो लौरी किन्यो । म केही बोलिँन केवल छोराले जता भन्यो उतै ह्यान्डल मोडिरहेँ ।
‘ए ए यतै रोक्नु त,’ छोरोले मेरो काँध थपथपायो । रोक्ने बित्तिकै छोरो नजिकैको गेटबाट भित्र छिर्यो । म बाहिर नै बसेँ । आङ् जिरिङ्ग भयो । पाँच वर्षअगाडि बुहारीको टोकसो सहन नसकेर बृद्धाश्रम छिरेकी मेरी आमा मेरो छोरोले किनिदिएको बुढेसकालको सहारा टेक्दै बाहिर निस्किँदै थिइन् ।
नर्सलाई घरबाट निकाल्ने वडासचिव पक्राउ
कोरोनाको कारण ३९ हजार बढीको मृत्यु
झापामा भोकमरी हुन नदिन राहतकोष
रौतहटमा मेयरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
भारतबाट आएका १३ जना टाडी क्वारेन्टाइनमा
इटहरीका सवै वडामा पठाइयो राहत समाग्री
विज्ञापनका लागि: +९७७-०२१-५११८४१